‘ओलीले राजीनामा दिए नेकपाकै बहुमतको सरकार बन्न सक्छ’ - Babal Khabar
‘ओलीले राजीनामा दिए नेकपाकै बहुमतको सरकार बन्न सक्छ’
१४ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता रघुजी पन्त राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक पनि हुन् । माधव नेपालका पालामा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका निभाएका पन्त अझै पनि नेकपाकै बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देख्छन् । तर, यसका लागि केपी ओलीबाटै पहल हुनुपर्ने पन्तको सुझाव छ ।
‘अहिले पनि राजनीतिलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने कुराको मुख्य एक्टर प्रधानमन्त्री हो’ पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ओलीसँग अहिले सुवर्ण अवसर छ, उहाँले फुटाएको पार्टीलाई फेरि मिलाउने । यसका लागि उहाँले राजीनामा दिने । पहिलाको सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार छु, तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर प्रचण्डजीलाई प्रस्ताव गर्ने । त्यसपछि अरु कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ ।
आफैंले मारेको संसदसँग विश्वासको मत लिन्छु र संसद फेस गर्छु भन्दै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एकछिन पनि बस्न नमिल्ने पन्तको धारणा छ । प्रस्तुत छ- प्रचण्ड-माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य पन्तसँग सामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अबको राजनीतिक कोर्स कता जान्छ भन्नेबारे सघन बहस भइराखेको छ । तपाईंको विचारमा संविधानको धारा ७६(१) अन्तरगत नेकपाकै बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छ कि छैन ? त्योखालको कसरतमा तपाईं पनि लाग्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ, के हो ?
म त अहिलेसम्म कुनै कसरतमा लाग्या छैन । बिहान-बिहान मर्निङवाक गर्ने हो कहिलेकाहीँ । जहाँसम्म राजनीतिज्ञहरुले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा खेलको नियमअनुसार हुन्छ । तपाईं फुटबल खेल्दा भलिबल खेल्न सक्नुहुन्न । तपाईंले गोल गर्न खुट्टैले बल हान्नुपर्छ ।
हाम्रो जुन सिस्टम छ, यो सिस्टमभित्र राजनीतिक खेल खेल्नुपर्छ । त्यो राजनीतिक खेल खेल्ने भनेको संविधानको स्पिरिट र भावनाअनुसार हुनुपर्छ । हाम्रो संसद, संविधान, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र अहिलेको अदालतको फैसलाले के भन्छ त भन्दा यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं । संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्छ । माधवले पनि स्वीकार्नुपर्छ, प्रचण्डजीले पनि स्वीकार्नुपर्छ । केपीले पनि स्वीकार्नुपर्छ र शेरबहादुरले पनि स्वीकार्नुपर्छ । अरु पार्टीका नेताहरुले पनि स्वीकार्नुपर्छ ।
यो समयमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले खेल्नुपर्ने भूमिकाचाहिँ के हो ?
तपाईंले आफूले असमयमा प्रतिनिधिसभालाई झुक्याएर घाँटी रेट्नुभयो । यो संसदलाई अस्पतालको बेडमा उपचार गरेर ज्युँदो बनाएर सर्वोच्च अदालतले पठायो । तपाईं कुन नैतिकताले यो संसदसँग विश्वासको मत माग्नुहुन्छ ? अलिकति विचार गर्नुपर्दैन प्रधानमन्त्रीले ? प्रधानमन्त्रीको त कुनै नैतिक ग्राउण्ड नै छैन, अहिले प्रधानमन्त्री भएर बस्ने । जुन प्रतिनिधिसभालाई उहाँले मार्नुभयो, कुन नैतिक ग्राउण्ड छ र मलाई सपोर्ट गर भन्ने ठाउँ छ उहाँले ?
जुन साँझ सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्‍यो, उहाँले तत्काल राष्ट्रपतिकहाँ राजीनामा गरेर आउनुपर्थ्यो । अहिलेको हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली र संविधानको स्पिरिट यो हो । तर, केपीजीलाई त लाग्दैन कुनै पनि कुरा । मलाई त अचम्म लाग्छ, कि त्यहाँ त केपीजीसँगै बुझ्ने साथीहरु छन् । किन केपीजीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्न सकिरहेका छैनन् ? किन सार्वजनिकरुपमा बोल्न सकिरहेका छैनन् ? केपीजीको विरोध गर्दा तुरुन्तै कट्टु नै भिजाउनुपर्ने अवस्था किन आएको ती साथीहरुमा मैले बुझ्या छैन । यो बडो दुःखद अवस्था हो ।
हिजो माधव नेपालसँग बहुमत हुँदा तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सल्लाह दिनेमा सुवास नेम्वाङ पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालले गएर राजीनामा दिनुस् भन्नुभयो । संविधानसभा त्यतिकै संविधान नबनाई भंग हुन्छ भने बरु तपाईंले छोड्नु उपयुक्त हुन्छ भनियो । माधव नेपाललाई त्यति सजिलो गरी सल्लाह दिन सक्ने, त्यसो भन्न सक्ने साथीहरु केपीजीलाई अब राजीनामा दिनुस् भन्न किन सक्दैनन् ?
Prevप्रचण्ड-माधवले प्रधानमन्त्री पद कुनै हालतमा पाउँदैनन् : प्रभु साह
nextसरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो ।